Manatitra fanampiana ho an'i Indonezia ny fiaramanidina Maleziana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manatitra fanampiana ho an'i Indonezia ny fiaramanidina Maleziana
Ny governemanta indoneziana, ny tafika an-dranomasina Royal Malaysian (RMAF), ary ny Airbus Foundation dia niara-niasa hanohana ireo asa fanampiana olona any Palu, Indonezia amin'ny fametrahana RMAF A400M sy ny fizarana kojakoja vonjy maika any an-tanàna.
Ny A400M, tonga tao amin'ny Base Air Halim any Jakarta tamin'ny 4 Oktobra, dia nanatitra fitaovana fanampiana ho an'i Palu hanohanana ireo niharan'ny horohoron-tany sy tsunami taorian'izay, izay nandrava ny tanàna tamin'ny 28 septambra.
Ny entana entin'ny A400M dia nahitana kamiao mpitondra solika avy amin'ny orinasan-tsolika Indonezia Pertamina ary ireo mpitrandraka avy amin'ny mpamokatra vokatra indostrialy PT Pindad. Ny fiaramanidina koa dia nitatitra sakafo sy zava-pisotro, fitafiana ary kojakoja ara-pahasalamana nangonin'ny Ministeran'ny orinasam-panjakana Indoneziana. Hozaraina amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misahana ny asa sosialy (CSR) an'ny minisitera, izay manohana mavitrika ny ezaka fanampiana.
Ny Airbus Foundation dia manohana ihany koa ny fitaterana sy ny fizarana kojakoja vonjy maika ary manampy ny IFRC amin'ny fanomezana ora 45 sidina miaraka amin'ny H125. Ny Foundation dia manohana an'i Medecins sans Frontières (MSF) ihany koa amin'ny alàlan'ny famelana azy ireo hifanaraka amin'ny mpandraharaha H155 izay hanampy ny ezaka fanampiana mandritra ny herinandro vitsivitsy. Ankoatr'izay, ny sary avy amin'ny zanabolana Airbus dia ampiasaina amin'ny valiny vonjy taitra taorian'ny fampiatoana ny Sata Iraisam-pirenena ho an'ny habakabaka.
"Ny olon-drehetra dia nahita ny fahakiviana nahatsiravina nateraky ny horohorontany sy ny tsunami tany Palu, ary ny eritreritsika dia miaraka amin'ireo traboina sy ny fianakavian'izy ireo izay namoy be", hoy i Andrea Debbane, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Airbus Foundation. "Ity no kely indrindra azontsika atao miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amintsika, izay nanome fanampiana ara-pitaovana ilaina ary nanampy betsaka tamin'ity antso vonjy maika ity."
Ny horohoron-tany dia narahin'ny tsunami hatramin'ny enina metatra, izay namely an'i Palu sy Donggala mpifanila vodirindrina aminy. Maherin'ny 1,400 ny olona maty, mponina manodidina ny 50,000 no voalaza fa tsy hita ary olona maherin'ny 200,000 no mila vonjy maika.